KEESSUMMAAN IJA JABEESSI ABBAA MANAATIIN GAD DEEBI’I JATTI!! – Welcome to bilisummaa
Waan tahu tokko yeroo baayyee tahuu isaa eega beekne booda maaliif akka tahu beekuun abshaalummaadha. Sababa inni tahuuf beeknaan bu’aafi miidhaa isaa hubattee fala barbaachisu malatta. Keessattuu warri akka keenyaa kan baroota dheeraa gabrummaan sammuu hadoochiteefi bitaa mirgaan diina baayyee qabu kun dammaqinaan waa hubachuu nu barbaachisa. Yeroo ammaa warraaqsa qabsoo diddaa gabrummaa daaddaa hin qabne kan ilmaan oromoo taasisaa jiran kana laamsheessuuf gufuun akka nutti baayyattu beekuun gaariidha. Wayyaaneen qabsoo ilmaan oromoo taasisaa jiran kana garmalee sodaachuu keessa malli harkaa badee akka nama du’aaf sakaraatuutti waanuma godhuufi dhiisu wallaalee tanuma itti fakkaate mara raawwachaa jira.
[ Saphaloo Kadiir | Abdulbasit ]
Previous Blood Roses from Ethiopia
Next Oromo children’s books keep once-banned Ethiopian language alive